माओवादी सांसदले घुर्की लगाएपछि फकाउन कांग्रेसलाई हम्मे हम्मे – OSNepal
माओवादी सांसदले घुर्की लगाएपछि फकाउन कांग्रेसलाई हम्मे हम्मे
Osnepal Admin (KTM) January 04, 2022 0
काठमाडौं, २० पुस – प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा मंगलबार उखु किसानको समस्याबारे सरकारका विभिन्न मन्त्रालयका सचिवसँग छलफल थियो । छलफलमा सभापति भरतकुमार शाहले उत्तर प्रदेशको मोडल प्रस्तुत गरेर दीर्घकालीन समाधानका लागि नयाँ कानुन बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । त्यसमा वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव दिनेश भट्टराई, राजश्व सचिव कृष्णहरि पुष्कर र कृषि सचिव गोविन्दप्रसाद शर्माले सहमति जनाउँदै समितिबाट भएका निर्देशन कार्यान्वयनमा गइरहेको र केही भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको सुनाए । उखु किसानको समस्या समाधानका लागि आफ्नो मन्त्रालय जुनसुकै निर्णय गर्न तयार रहेको बताए । तर सधै प्रतिबद्धता आउने र समाधान नभएको देखेका सांसदहरु भने रन्किए ।
धर्मशीला कड्किँदा माओवादीकै मोदीले चाहिँ चेतावनी दिए । ‘आगामी ६ महिनामा नीति बन्दै गर्छ, अहिले राज्यले नै ८/१० करोड वक्यौता देओस् । पछि उद्योगबाट असुल्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘राज्यले किसानको समस्या सुनेन, बाँकी भुक्तानी तत्काल दिएन भने माइतीघर मण्डलामा गएर आमरण अनसन बस्छु । किसानसँगै अनसन बसेर घुँडा टेकाउँछौं ।’
मोदीको चेतावनीपछि बोलेकी कांग्रेस सांसद पार्वती डिसी चौधरीले माहोल शान्त पार्न खोजिन । उनले आफ्नै सरकार भएको बेला अनसन बस्ने कुरा नगर्न अनुरोध गरिन । ‘माननीयज्यूले अनसन बस्ने कुरा नगर्नुस् । आफ्नै सरकार छ । समस्या समाधानका लागि सरकारलाई भन्नुपर्छ,’ उनले भनिन् ।
उनी त्यतिमै रोकिइनन्, समस्या समस्या समाधान नहुनुमा कसको कमजोरी हो भनेर प्रश्न गर्न थालिन । ‘मन्त्रीहरु पनि हामीजस्तै माननीय भएरै गएको छ । किन रोकिइरहेको छ । मन्त्रीलाई सचिवले नटेरेको हो कि सचिवले मन्त्रीलाई बुझाउन नसकेको हो ? हाम्रो सरकार छ, किन समाधान हुन सकिरहेको छैन ? यसमा मन्त्रीहरू पनि गम्भीर हुनुपर्छ । सरकारले तुरून्त समाधान गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन् ।
कांग्रेसबाट सभापति रहेका शाहले पनि माहोल शान्त पार्ने प्रयास गरेका थिए । सांसद धर्मशीला वाणिज्य सचिव भट्टराईमाथि कड्किँदा शाहले उहाँ(सचिव)ले सबै कुरा कहाँ भन्न सक्नुहुन्छ, मन्त्री नै बोलाउला भनेर भनेका थिए । माओवादी सांसदहरुले चर्को प्रश्न गर्दा सचिव भट्टराई छलफल नसकिँदै सभापति शाहसँग विदा मागेर हिँडेका थिए । छलफलमा माओवादी सांसदहरुले सरकारका सचिवबाट सन्तुष्ट हुनेगरी जवाफ नै नपाएको गुनासो गरेका थिए ।